★ I-Lapland Yurts ★ Yurt No.1 ★ - I-Airbnb
★ I-Lapland Yurts ★ Yurt No.1 ★
Boden N, Norrbottens län, i-Sweden
Itende ibungazwe ngu-Marie-José
Jabulela ubulula bamaqhugwane ethu ase-Mongolia! Amatende atholakala endlini yethu ngakolunye uhlangothi echibini futhi ngakolunye uhlangothi ehlathini. Ungalala etendeni nabantu abadala abangu-2, noma umndeni (singafaka imibhede yezingane, ngaphandle kwenkokhiso eyengeziwe). Ehlobo nasebusika, uyigcina ifudumele futhi ithokomele ngokwenza umlilo esitofini sezinkuni. Indlu yesevisi enekhishi, indlu yangasese, ishawa, indawo yokuphumula nendawo yokudlela cishe ingamamitha angu-50 ukusuka ematendeni.
Ukuhlala e-yurt kuyinto emsulwa, kungakhathaliseki ukuthi isimo sezulu sinjani. Kuyindlela ephelele yokuphumula. Iholide le-yurt liyinketho yokuzijabulisa, ukuzijabulisa nomuzwa wokuba yingxenye yokuthile okukhethekile...kungakhathaliseki ukuthi okwempelasonto noma ikhefu laphakathi nesonto, isonto noma iholide elide.
Ukuba ndawonye endaweni eyindilinga kuba nomthelela omkhulu kubantu. Lokhu sikwazi ngokuhlangenwe nakho kwethu futhi izivakashi zethu nazo zichaza lo muzwa.
Ngenxa yogqinsi lwe-insulation ezwakalayo, i-yurt ihlala ilihle futhi ipholile entwasahlobo nasehlobo futhi ifudumele ekwindla nobusika.
Ukutheza izinkuni, ukubasa umlilo, ukukha amanzi nokujabulela ukuphila!
Ukuthola ukwaneliseka, ukujabulela umuzwa wokuthula olethwa yile misebenzi, ukuhlala ndawonye eduze kwesitofu sezinkuni, ukuxoxa izindaba, ukuxhumana nomunye nomunye. Ukulalela umoya nemvula ophahleni…ugodo olulodwa emlilweni…ungathanda inkomishi yetiye noma sivule ibhodlela lewayini?
Iholide le-yurt lifanele wonke umuntu ojabule enhliziyweni futhi omncane emoyeni. Ukuhlala e-yurt kumelela ‘isikhathi sekhwalithi’, into evame ukuntuleka ekuphileni kwanamuhla. Le ndawo inikeza imvelo enhle nendawo enokuthula futhi ukuchitha isikhathi ndawonye ku-yurt kuhlale kunenzuzo.
Isayithi lilungele izingane. Bangakwazi ukudlala ngaphandle amahora amaningi, bahlole ihlathi, bagxume ku-trampoline, badlale ibhola enkundleni ye-basketball, bakhiphe isikebhe bajabulele ukubhukuda echibini.
Indawo yethu iseduze komgwaqo owubhuqu. Eceleni komgwaqo ikakhulukazi kunamakhabethe asehlobo futhi zi-3 kuphela izindlu ezihlala kuzo unyaka wonke (kuhlanganisa nathi) Kuthule kakhulu lapha futhi ebusika kumnyama kakhulu. (Kuhle ngokubuka izinkanyezi, i-milky-way kanye ne-Northern Lights!)
Sizobe sikhona endaweni isikhathi esiningi. Uzosibona siqinisekisa ukuthi konke kuyasebenza futhi ungahlala usibuza uma kukhona okudingayo! Sizokujabulela ukukubonisa emahlathini uma ufuna :)
Izilimi: Nederlands, English, Svenska
Hlola ezinye izinketho ezise- Boden N namaphethelo